Gịnị bụ anyanwụ: e ji mara, mejupụtara na ọrụ | Network Meteorology
Gịnị bụ anyanwụ
Kpakpando nke hibere n’etiti mbara igwe ma kacha nso ụwa nso bụ anyanwụ. N'ihi anyanwụ, ụwa anyị pụrụ inye ike n'ụdị ìhè na okpomọkụ. Ọ bụ kpakpando a na-ewepụta ọnọdụ ihu igwe dị iche iche, mmiri mmiri na oge nke afọ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ bụ kpomkwem n’ihi na anyanwụ na-enye ọnọdụ ndị dị mkpa maka ịdị adị nke ndụ. Njirimara nke anyanwụ bụ ihe pụrụ iche na arụmọrụ ya na-adọrọ mmasị. O nwere ụfọdụ ndị na-amaghị kedu ihe bụ anyanwụ ma ọ bụ njirimara ya, ọrụ ya na ọrụ ya.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe anyanwụ bụ, njirimara ya na ọrụ ya.
1 Gịnị bụ anyanwụ
3 Gịnị bụ anyanwụ: esịtidem Ọdịdị
Nke mbụ bụ ịmata ihe anyanwụ bụ na otú o si malite. Ekwesiri iburu n’uche na obu ihe kachasi mkpa n’elu igwe maka idi ndu anyi na nke ndi ozo di ndu. E nwere ọtụtụ ihe ndị kpụworo anyanwụ ma na-eme atụmatụ na ha malitere ịtụle ya n'ihi ike ndọda ka ọ na-eto. Ebumnobi ndọda bụ ihe kpatara ihe ji achịkọta nke nta nke nta ma, n'ihi ya, okpomọkụ ahụ mụbara.
Oge ruru mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị elu nke na ọ ruru otu nde Celsius Celsius. N'oge a mgbe ọnọdụ okpomọkụ na ike ndọda yana okwu agglomerated bidoro mepụta mmeghachi nuklia siri ike nke na ọ bụ ya kpatara kpakpando kwụsiri ike nke anyị maara taa.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-azọrọ na ntọala nke anyanwụ bụ mbibi nuklia niile na-erite na igwe. Anyị nwere ike ịtụle anyanwụ na-ahụkarị dị ka kpakpando na-ahụkarị nke ọma n'agbanyeghị na ọ nwere igwe, radius na ihe ndị ọzọ dị iche na mpụga nke ihe a na-ewere dị ka kpakpando. Enwere ike ịsị na ọ bụ njirimara ndị a niile na - eme ka ọ bụrụ naanị usoro mbara ala na kpakpando nwere ike ịkwado ndụ. Ugbu a anyị amaghị ụdị ndụ ọ bụla karịrị sel sel.
Humanmụ mmadụ na-enwe mmasị na Sun mgbe niile.Ọ bụ ezie na ha enweghị ike ile ya anya, ha mepụtara ọtụtụ ụzọ iji mụọ ya. A na-eji anwụrụ anwụ ele anyanwụ anya site na iji teliskop ndị dịlarị n'ụwa. Taa, site na ọganihu nke sayensị na teknụzụ, ọ ga-ekwe omume ịmụ anyanwụ site na iji Satellites artificial. N'iji spectroscopy, ị nwere ike ịmata nhazi anyanwụ. Zọ ọzọ isi mụọ kpakpando a bụ meteorites. Ndị a bụ isi mmalite nke ozi n'ihi na ha na-edebe usoro mbụ nke ígwé ojii.
Ozugbo anyi matara ihe anyanwu bu, ka anyi lee ihe njiri mara ya bu:
Ọdịdị nke anyanwụ dị nfe. N’adịghị ka kpakpando ndị ọzọ dị na mbara igwe, anyanwụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke gbara ya gburugburu. Ọ bụrụ na anyị elee anya na mbara ụwa anyị, anyị ga-ahụ diski okirikiri zuru oke.
O nwere ihe di iche-iche nke bara ụba dika hydrogen na helium.
Ogologo angular nke anyanwụ bụ ihe dị ka ọkara ogo ma ọ bụrụ na ewere nha site na ụwa.
Mkpokọta ebe ahụ dị ihe dịka kilomita 700.000 e mewo atụmatụ ya site n ’akụkụ ya. Ọ bụrụ na anyị atụnyere ogo ya na nke ụwa anyị, anyị ga-ahụ na nha ya buru ihe ruru okpukpu 109. N'agbanyeghị nke ahụ, a na-ekewa anyanwụ dị ka obere kpakpando.
Iji nwee otu mmụba na mbara igwe, anya dị n'etiti anyanwụ na ụwa ka ewerela dị ka ngalaba mbara igwe.
A nwere ike ịtụ uka nke anyanwụ site na osooso na ala nweta ya mgbe ọ bịaruru gị nso.
Dị ka anyị niile maara, kpakpando a na-eme ihe ike site n'oge ruo n'oge ma nwee njikọ na ndọta. N'oge ahụ, anwụ na-acha ọkụ, ọkụ na ihe na-agbapụta n'ahụ.
Njupụta nke anyanwụ dị ala karịa nke ụwa. Nke a bụ n'ihi na kpakpando ahụ bụ gas gas.
Otu n’ime njirimara kacha mara amara n’anyanwụ bụ n’anwụ ya. Akọwapụtara ya dịka ike nke enwere ike ịpụta site na nkeji oge. Ike anyanwụ dị ihe karịrị iri rutere na 23 kilowatts. N'ụzọ dị iche, ike na-egbuke egbuke nke ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ erughị 0,1 kilowatts.
Ọnọdụ dị elu nke anyanwụ na-arụ ọrụ ruru ihe ruru ogo 6.000. Nke a bụ nkezi okpomọkụ, ọ bụ ezie na isi ya na elu ya bụ ebe na-ekpo ọkụ.
Gịnị bụ anyanwụ: esịtidem Ọdịdị
Ozugbo anyi matara ihe anyanwu bu na ihe ndi ji mara ya, anyi ga-ahu ihe bu ime ya. A na-ahụta ya kpakpando dwarf odo. Uzo nke kpakpando ndia di n'etiti oge 0,8 na 1,2 nke eze eze. Kpakpando nwere ụdịdị ụfọdụ dị iche iche na-adabere n'ìhè ha, ọ̀tụ̀tụ̀ ha, na ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ ha.
Iji kwado ọmụmụ na nghọta nke njirimara anyanwụ, a na-ekewa usoro ya na ọkwa 6. A na-ekesa ya na mpaghara dị iche iche ma malite n'ime. Anyị ga-ekewa ma tụọ isi njirimara nke ọkwa dị iche iche.
Isi nke anyanwụ: Ogo ya bụ ihe dịka 1/5 nke radius nke anyanwụ. Nke a bụ ebe ike niile radiated site na akwa okpomọkụ na-eme. Ọnọdụ okpomọkụ dị ebe a eruola nde Celsius nde 15. Ọzọkwa, nrụgide dị elu na-eme ka ọ bụrụ mpaghara ya na ihe nrụpụta nuklia nuklia.
Mpaghara redioactive: Ike sitere na ntọala na-agbasawanye na usoro radieshon. Na mpaghara a, ihe niile dị na steeti plasma. Ọnọdụ okpomọkụ ebe a adịghị elu dị ka etiti ụwa, mana o rutela ihe dịka nde Kelvin 5. A na-agbanwe ike ike n'ime foto, nke a na-ebufe ma weghachite ọtụtụ ugboro site na ihe ndị mejupụtara plasma.
Mpaghara Convective: Mpaghara a bụ akụkụ nke foto na-eru na mpaghara radieshon na ọnọdụ okpomọkụ dị ihe dịka 2 nde Kelvin. Ngbanwe ume na-eme site na convection, n'ihi na okwu a abụghị ihe a na-etinye. Ntughari ume na-ebugharị ikike na-eme site na mmegharị nke ikuku gas na okpomọkụ dị iche iche.
Ihe osise: Ọ bụ akụkụ nke kpakpando pụtara ìhè na anyị chọrọ ya mgbe niile. Anyanwụ esighi ike kpamkpam, kama ọ bụ plasma. Pụrụ ịhụ photosphere site na teliskop, dị ka ogologo oge ha nwere a iyo otú ọ na-adịghị emetụta anyị akara nke anya.
Chromosphere: Ọ bụ na oyi akwa nke ihe mkpuchi ahụ, nke ya na ikuku ya. Ihe na-egbuke egbuke ebe a na-acha uhie uhie, ọkpụrụkpụ na-agbanwe agbanwe ma ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti ogo 5 na 15.000.
Okpueze: Ọ bụ akwa nke nwere ọdịdị na - adịghị mma ma gbasaa karịa radiesị anyanwụ ọtụtụ. Anya anya, ogo ya dị ihe dị ka nde 2 Kelvin. O doro anya ihe kpatara okpomọkụ nke oyi akwa a ji dị elu, mana ha metụtara njikọ magnet siri ike nke anyanwụ na-eweta.
Enwere m olile anya na ị nwere ike ịmatakwu ihe anyanwụ bụ na ihe e ji mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Gịnị bụ anyanwụ